Kitaabni qulqulluun kristaanni gara qarshii liqqeeffachuu deemuu maal jedha?
Gaaffii: Kitaabni qulqulluun kristaanni gara qarshii liqqeeffachuu deemuu maal jedha? Yeroo hundumaa qabiinsa qarshii liqiin dogogoraa?
Deebii: Phaawulos jaalalaan ala gatiin homaa akka nurra hin jiraanne Waaqayyo gosa kamiin yeroo sirritti kan hin kaffalamne gatiin akka nurra hin jiraanne yaadachiisa (Rom. 13:8) (Faru. 37:21). Haala wal fakkaataan Waaqayyo haala ifa ta’een liqii gosa hundumaa hin dhorkine. Kitaabni qulqulluun liqii dhorkuudhaan of eeggachiisa, fi gara liqii akka hin deemne of eeggachiisa, fi gara liqii akka hin deemne jajjabeessa garuu liqii hin dhorkine. Kitaabni qulqulluun gatiin kan qabaman warra liqeeffatan kan isaan dhiphatan jecha firdii cimaa dubbata garuu warra liqeeffatan itti hin faradu.
Kan biraan namoonni tokko tokkoo dhala liqii irra iru ni gaaffatu garuu dhala sirrii ta’ee liqiin yoo argame qarshii fudhachuun kitaaba qulqulluudhaan kan eegamu ta’uu akka danda’u ni argina. (Fak. 28:4, Mat. 25:27). Seera Israa’eel duriittiin waan tokko irratti dhala ni morma innis hiyyeesota irraa (Lew. 25:35-38). Seerri isaa dinagdee hawaasaa fi dhaabbata hafuuraa qabu, lammanuu garuu wal fakkaataan kaasuun barbaachiisa dha. Jalqabatti seerrichi hiyyeesota kan ta’an rakkoo caaluu keessaa akka hin seene godha. Hiyyummaa keessatti kufuu isaaniin waan hamaa ta’uun isaa osoo hin tiqaatiin irra deebiin gargaarsa barbaaduun isaanii baay’ee kan isaan sodaachiisuu dha kan inni ta’u. Garuu dabalataan liqii deebisee kaffaluuf barbaaduu isaanii hiyyeesii kan hin dandeenye dhala kaffaluutu irra jira kun immoo seerrichi kan fayyadu caalaa kan miidhu ta’a.
Seerri lammaffaan barumsa hafuuraa barbaachiisaa ta’e hubachiisa. Liqeessaadhaaf liqeefftaa irraa dhala isaa kaasuun araara gochuu dha. Liqicha yeroo liqeeffateetti horichaa irraa argachuu kan inni danda’u bu’aa dhaba. Ha ta’uu malee gatii isaan irra jiruu osoo hin lakkaa’in saba isaaf araara baay’ateen Waaqayyoon gallateeffachuun karaa qabatamaa ta’uu danda’a. Waaqayyo warra Israa’eel araara isaatiin garbummaa Gibxiiti bilisa akka isaan baase akkasumas gadi qabamuun garbummaa keessa kan jiraniif lafaa ofii isaanii kenneera (Lew. 25:38) araara wal fakkaataa ta’ee saboota biyya isaaniif akka argisiisan barbaada. Kristaanoonni haala wal cina ta’ee keessa dha kan jiran, jireenya Yesus Kristos du’aa fi du’aa ka’uu Waaqayyoodhaaf gatii cubbuu keenyaa nuuf kaffaleera. Nuyis carraa isaa yoo qabaane kan biroon rakkina keessatti kan jiran keessaa iyyuu amantoota dhiphina liqii isaa ba’uu kan hin dandeenye gargaaruu ni dandeenya Yesus Kristos sarara kana irra kan jiran waa’ee araaraa ilaalcha isaan qaban kan ilaalatu fakkeenyaan dubbateera (Mat. 18:23-35).
Kitaabni qulqulluun qarshii liqeeffachuu ifatti hin dhorkine yookaanis hin yakkine. Ogummaan kitaaba qulqulluu kan inni nu barsiisu yeroo baay’ee gara liqii deemuun shaakala gaarii miti. Liqiin bu’uura irraa nama nuuf liqeesse garboota nu godha. Haala wal fakkaataan haaloota tokko tokkoon gara liqii deemuun hameenya miti. Horiin ogummaan hanga qabameetti fi seerri liqii faayidaa irra erga oole Kristaanoonni itti gaaffatamummaa liqii barbaachiisa yoo ta’ee itti seenu danda’u.